About us - Xuzhou Sanhe okuzenzakalelayo Control Equipment Co., Ltd.
Xuzhou Sanhe okuzenzakalelayo Control Equipment Co., Ltd.
Izwe / Isifunda Sasefekthri: Indawo Yokuthuthukiswa Komnotho TongShan
Amamitha ayisikwele ayi-1,000-3,000
Isevisi ye-OEM Inikelwe
US $ 10 Million - US $ 50 Million
I-Xuzhou Sanhe Automatic Control Equipment Co., Ltd. yasungulwa ngo-Ephreli 2005, egxile ku-R & D, ekukhiqizeni nasekuthengiseni izilawuli zokushisa kwamakhompiyutha, izilawuli zomswakama, izivikeli zezimoto ezihlanganisiwe, amabhokisi wokulawula amafriji, amabhokisi wokulawula amayunithi afanayo, isitoreji esibandayo se-PLC amakhabethe wokulawula, njll Eight uchungechunge ezingaphezu kuka-200 izinhlobo imikhiqizo ukujabulela idumela eliphezulu ekhaya aphesheya. Le nkampani njengamanje inabasebenzi abangaphezu kwama-80, phakathi kwabo okungaphezu kwama-75% wabasebenzi abaneziqu zasekolishi noma ngaphezulu; isitshalo esivele sikhona senkampani sihlanganisa indawo engaphezu kwamamitha-skwele angama-4,000, izintambo zokukhiqiza eziqinisiwe eziyi-10, kanye nomthamo waminyaka yonke wokukhiqiza nomhlangano wamasethi (amasethi) angaphezu kwama-350,000. ), inezinto ezikhethekile zokukhiqiza nokuhlola, futhi inamazinga afanayo wokuhlola nokuhlola. Le nkampani iyunithi lesitifiketi sokuphathwa kwekhwalithi ye-GB / T19001-2016 / ISO9001: 2015. Imikhiqizo eminingi isidlulile isitifiketi se-CE, ngaphandle kokuthengisa. Inezindawo zokuthengisa nezinsizakalo emadolobheni amaningi nasezifundeni ezweni lonke, futhi iyinani lamabhizinisi asekhaya aziwayo ahlinzeka ngezinsizakalo ezisekelayo.
I-Xuzhou Sanhe inesikhungo "sokugcina ucwaningo esibandayo se-PLC sobuchwepheshe bezobunjiniyela" eChina. Abaphenyi besikhungo sobuchwepheshe banesisekelo esiqinile sethiyori kanye neminyaka yokuhlangenwe nakho okusebenzayo okuhilelekile ekulawuleni ifriji kanye nobuchwepheshe be-PLC. Ngasikhathi sinye, isikhungo sokucwaninga sigcina ubuchwepheshe besikhathi eside namakholeji amaningi asekhaya nasemanyuvesi. Ukubambisana, inqwaba yabasebenzi abangochwepheshe nabezobuchwepheshe kanye nemishini yokuhlola nokuhlola emayunivesithi inikeza ukwesekwa okuqinile komsebenzi we-Engineering Technology Center.Njengomholi embonini yemishini yokulawula okuzenzakalelayo, iXuzhou Sanhe Automatic Control Equipment Co., Ltd. izibophezele ukwakha umholi embonini yemishini yokulawula othomathikhi ngenxa yomqondo wentuthuko oqondiswe kusevisi, umoya ohehayo wokusebenza kanzima, kanye nobuchwepheshe bobuchwepheshe bokusebenza kahle.
Le nkampani iphakathi kwabayisishiyagalombili abahamba phambili embonini yefriji yasekhaya, enesabelo semakethe cishe esingu-8%. Ukufakwa kwezimakethe: ukumbozwa kwasekhaya kwezifundazwe ezingama-31, omasipala, izifunda ezizimele, kanye nomasipala, amakhasimende abathengisi abangaphezu kwama-300, namakhasimende amabhizinisi asekela angaphezu kwekhulu; isilinganiso sokuthekelisa: kubalwa cishe ama-35% wokuthengiswa okuphelele kuthengiselwa amazwe nezifunda: Amazwe afaka phakathi amazwe aseYurophu, iMiddle East, iHong Kong, iTaiwan nezinye izifunda. Ukuthengwa kwempahla eluhlaza: Kunabahlinzeki abangaphezu kuka-80, abangaphezu kuka-60% bangama-brand adumile aphesheya, okunye okusele kunguMkhiqizo owaziwayo wasekhaya
Imigqa Emikhiqizwayo Ejwayelekile
Imikhiqizo yenkampani yimikhiqizo yohlelo lokusebenza lobuchwepheshe be-microcomputer. Amachipsi asetshenzisiwe azinzile ekusebenzeni, aqedile ngemisebenzi, anokuvikelwa okuningi, ukwakheka okuthuthukile nokunengqondo kwesakhiwo nokucubungula inqubo, futhi izinga lobuchwepheshe lithuthukile emhlabeni jikelele futhi liqhubekele phambili ezweni. Le nkampani inaka ukubaluleka okukhulu ekuthuthukisweni komkhiqizo futhi iqhubeka isebenzisa izinto ezintsha, ubuchwepheshe obusha nezinqubo ezintsha, ukuze ukwenziwa ngcono kwemikhiqizo kuhlale kuhamba phambili embonini yasekhaya yokuqandisa. Eminyakeni edlule, isikali sokukhiqiza siqhubeke nokukhula kanti nesabelo semakethe besilokhu sikhula ngokuqhubekayo. Umkhiqizo unezinhlobonhlobo zezicelo emkhakheni wokulungiswa kwefriji kanye nefriji nemboni. Inkampani ingaklama futhi yenze ngokwezifiso imikhiqizo ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Kubalwa phakathi kwabayisishiyagalombili abaphezulu embonini yasekhaya yokuqandisa
UXuzhou Sanhe uzibophezele ekubeni ngungoti emkhakheni wokuphathwa kwamandla nokulawula okuzenzakalelayo, esiza ukwenza kahle umkhakha ngokunikeza ubuchwepheshe nezixhumanisi ezixhunyiwe. Kusukela yasungulwa, inkampani ihambise amayunithi / amasethi wemikhiqizo angaphezu kwezigidi eziyisithupha ezimakethe zasekhaya nezangaphandle. Le mikhiqizo isebenza izimboni eziningi: ifriji, amakhemikhali, ukukhiqizwa kwama-boiler, ukonga amanzi (ukuphakelwa kwamanzi), ukukhiqizwa kwemishini, nokulwa nomlilo (ukulawula isakhiwo) Eminyakeni yamuva nje, inkampani yethu inikeze izixazululo ezihlelekile zamaphrojekthi amaningi. Emikhulu ibandakanya iphrojekthi yokupholisa kokhonkolo yeSiteshi Samandla Samanzi saseBaihetan; iphrojekthi yokugcina ebandayo ye-Macau Cross-border Industrial Park, iphrojekthi yokudlela yezikhunta edliwayo yaseZhenfeng County, esifundazweni saseGuizhou, e-Lengyang County, ephrojekthi yomtapo wolwazi wokuzalisa amabhaktheriya amakhulu eLuoyang, iphrojekthi yokugcinwa kwamakhaza i-Hangzhou Ruihui Bio-pharmaceutical, akukhathalekile ukuthi ikuphi imikhiqizo yakwaSanhe, benze kahle futhi bathola ukunconywa okuvela kumakhasimende.
Usayizi wemakethe wenkampani yethu ufinyelele kuma-yuan ayizigidi ezingama-29.85
Ngo-2020, inkampani yasungula iJiangsu Sanhe Control Technology Research Institute. Isikhungo sokucwaninga sincike ekusetshenzisweni kwecebo lentuthuko eliqhutshwa emisha. Ngasikhathi sinye, ibambisana namanyuvesi namakolishi futhi ibona ukuguqulwa kwamaphrojekthi ocwaningo lwesayensi. Esikhathini esizayo, isikhungo socwaningo sizoba uhlobo olusha lwezinga eliphezulu lamathalente aphezulu embonini. Izikhungo ze-R & D zikhuthaza ukuhlanganiswa nokuthuthukiswa kwamathalente, ubuchwepheshe, amaphrojekthi, imikhiqizo kanye nezinye izinto ezintsha ezifundeni nasezimbonini. "Ubungani nobuqotho, ukuhlanganyela ukuchuma" yifilosofi yethu yebhizinisi nokuphishekela kwethu okunganyakazi. "Phishekela ubuhle, uzidlule thina" yisikhali semilingo sokuphumelela kwethu ukumaketha nokusebenza. Ngibheke phambili ekusaseni, uSanhe uzoqhubeka nokuthatha "izinto ezintsha, ubuchwepheshe obusha, nezinqubo ezintsha" njengenhloso yakhe, "ephishekela ubuhle, ezedlula yena" enqubeni yezulu, afeze intuthuko emisha, futhi ahlanganyele izandla nozakwabo ukwakha ikusasa eliqhakazile.
isilawuli se-digital thermostat, isilawuli sokushisa se-incubator, ukulawulwa kokushisa okuzenzakalelayo, isilawuli sokushisa se-thermostat, i-aquarium thermometer yedijithali, i-thermometer yedijithali,